यस्तो छ बंगलादेशविरुद्ध खेल्ने नेपाली टिम
२६ वैशाख, आइतबार
, May 09, Sunday
संक्रमण प्रधानमन्त्री काठमाडौं किसान कोरोना दुर्घटना
२०७७ चैत १४ शनिबार
१४ चैत, काठमाडौं । थ्री नेसन्स कप अन्तर्गत बंगलादेशविरुद्धको खेलमार्फत त्रिदेव गुरुङ र सन्जोग राईले आधिकारिक रुपमा डेब्यु गर्दैछन् । यसअघि किर्गिस्तानको ओलम्पिक टिमसँग त्रिदेव र सन्जोगले पहिलो रोजाइमा खेलेपनि त्यो आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल थिएन ।
त्यसैले दुवै खेलाडीको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त खेल हुनेछ । मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले किर्गिस्तानविरुद्ध खेलेको टोलीलाई नै बंगलादेशविरुद्ध निरन्तरता दिएका छन् । टिममा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।
अर्कोतर्फ बंगलादेशले भने किर्गिस्तानविरुद्ध खेलको टिममा सबै ११ जना खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । जसमा दुई डिफेण्डर इमोन र मेहदी हसनले डेब्यु गर्दैछन् । अघिल्लो खेलमा पहिलो रोजाइमा नखेलेका नियमित कप्तान जमन भुइयनले शनिबार पहिलो रोजाइमा खेल्दैछन् ।
बंगलादेश यसअघि नै फाइनल पुगिसकेको छ । नेपालले फाइनल पुग्न शनिबार कम्तीमा पनि बंगलादेशसँग बराबरी खेल्नुपर्छ । बंगलादेशले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानलाई १–० ले पारजित गरेको थियो । नेपालले भने किर्गिस्तानसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो ।
यस्तो छ एकादशी तिथिमा चामल नखानुकाे शास्त्रीय मान्यता
अलविदा नवीन्द्रराज जोशी ! सानेपामा चढाइयो सम्झनाको फूल (फोटोफिचर)
देउवासँगै बाबुराम पनि भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार !
निराजनलाई म्यानेजर राखेर मुम्बई लागिन् निरुता
प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, अर्को विषयको सुरुवात हुन्छ
ओलीलाई माधवकुमार नेपालको स्पष्टीकरण-तपाईं नै हो, प्रचण्डको मतियार
बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री हसिनाको हत्या प्रयास गर्ने १४ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला
चीनबाट आइपुग्यो कोरोनाविरुद्धको खोप